SOMALITALK - SUXUFIGA
Doorka Suxufiga Soomaaliyeed Qeybtii 2aad: Terra iyo Caanageel
Qaybtii 1aad ka akhri halkan
Kusoo dhowaada qeybtii 2aad ee barnaamijka Doorka Suxufiga Soomaaliyeed. Waxaa Barnaamijka todobaadkan ka qeyb qaadanaya laba suxufi oo kala ah:
Maxamed Aadan Xirsi "Terra" oo madax kasoo noqday idaacadaha Muqdisho iyo Hargeysa, sidoo kale agaasime ka noqday wakaaladii wararka Soomaaliyeed ee SONNA (Somali National News Agency). Terra wuxuu saxaafada kusoo biiray sanadkii 1973 wuxuuna doorar kala duwan oo isugu jira diyaariye, soo saare, tebiye iyo agaasime kasoo noqday Radio Muqdisho, Radio Hargeysa iyo SONNA. Wuxuu Terra ka qalin jebiyay kuliyada Saxaafada wuxuuna dagaaladii sokeeye kadib, madax ka noqday ilaa iminkana ka shaqeeyaa idaacad laga dhageysto dalka Kenya oo magaceeda la yiraahdo IQRA.
Maxamed Aadan Guuleed "Caanageel" oo mudo 12 sano ah tifaftire ka ahaa wargeyska Muqdisho kasoo baxa ee Xog-Ogaal. Caanageel wuxuu gudoomiye- xigeen kasoo noqday urur ay ku mideysnaayeen suxufiyiinta Soomaaliyeed oo la oran jiray SIJU, ururkaas oo uu gudoomiye ka ahaa Saciid Bakar Muqtaar. Caanageel wuxuu iminka kunool yahay magaalada London ee dalka Britain.
Hadaba Barnaamijka oo dhameystiran ayaad isagoo maqal ah ka dhageysan kartaa halkan:
Fadlan Guji oo Dhageyso halkan...
Su'aal: Terra sida aan la socono waxaad madax kasoo noqotay idaacadihii Muqdisho iyo Hargeysa, waxaad sidoo kale madax kasoo noqotay wakaaladii wararka Soomaaliyeed ee SONNA. Hadaba wakaaladu maxey kaga duwaneyd labada idaacadood?
Terra: Wakaalada wararka Soomaaliyeed ee SONNA waa wakaalad warar, waxeyna wararka usoo ururineysay hay'adaha kale ee warbaahinta sida idaacadaha, telefishinka iyo wargeysyadaba. SONNA waxey u dhigantaa wakaaladaha wararka ee Reuters, Associated Press iyo AFP, waxeyna aheyd wakaalada ay wararka ka qaataan hay'adaha warbaahineed ee Soomaaliya.
Su'aal: Caanageel waxaan ka warqabnaa in aad mudo dheer madax kasoo aheyd wargeyska Xog-Ogaal, hadaba goormaa la aas,aasay wargeyskaas?
Caanageel: Xog-ogaal waxaa la aas,aasay 25 May 1991 ilaa iyo haatana wuu shaqeeyaa
Su'aal: Guul intee la'eg baad is leedahay wargeysku wuu ku talaabsaday mudadan dheer uu shaqeynayey?
Caanageel: Runtii xiligu xili dhib badan oo aan guul lagu talaabsan karin oo ay dagaalo sokeeye socdeen buu ahaa, wuxuu wargeysku kamid yahay laba ama sadex wargeys oo kasoo hartay 73 wargeys oo Muqdisho laga aasaasay 1991dii. Wuxuu wargeysku door weyn kasoo qaatay in uu si dhex dhexaadnimo ah u tebiyo colaadii dalka ka dhacday.
Su'aal: Terra saameyn intee la eg baad is leedahay idaacadihii aad madaxda kasoo noqotay ee Muqdisho iyo Hargeysa wey ku lahaayeen mujtamaca Soomaaliyeed?
Terra: Warbaahintii xiligaas waxaa laheyd dowlada, iyada ayaa gacanta ku haysay, iyada ayey u adeegayeen, itijaaha siyaasadeed ee ay dowladu u dejiso ayeyna raacayeen. Qalabkii idaacadaha waxaa lahaa dowlada, warfidiyeenadana waxaa mushaharka siin jirtay dowlada. Marka ma jirin qof siyaasada dowlada banaanka ka jooga, waxeyna suxufiyiintu raacayeen shuruudaha iyo qawaaniinta warbaahinta u degsanaa.
Su'aal: Caanageel door intee la'eg bey saxaafada iminka dalka ka jirta ka qaadatay hurintii colaadii sokeeye ee dalka ka dhacday?
Caanageel: Runtii aniga waxaan dhihi karaa saxaafada door bey ku laheyd dhibaatadii dalka ka dhacday, maadaama uusan jirin shuruuc iyo damiir haga saxaafada, waxaad moodaa in saxaafadu noqotay wado colaada iyo nabadaba loo maro, waayo waxaa maqnaa shuruucdii xakameyn laheyd suxufiga, sidaa daraadeed saxaafadu door bey ku laheyd colaadii dalka ka dhacday.
Su'aal: Saxaafadu waa hay'ada labaad ee ugu awooda badan caalamka marka laga reebo dowladaha. Hadaba awood intee la'eg baad is leedahay saxaafada Soomaalidu wey ku dhex leedahay mujtamaca Soomaaliyeed?
Terra: Saxaafada Soomaalidu waxey soo martay heerar kala duwan, mid waa mid primitive ah oo jirtay intii aanu gumeysigu dalka imaan, mid xiligii gumeysiga ayey abuurantay, midii xornimada kadib dhalatay ayaa xigtay, tii kacaanka ayaa daba socotay, hadana midii dagaalada sokeeye ayaa jirta. Hadaba mar kasta ha joogtee saxaafadu door muhiim ah ayey ku leedahay bulshada waayo iyada ayaa qeyb ka qaadaneysa nolol maalmeedka mujtamaca Soomaaliyeed, hadii ay iyadu garato doorkeedana bulshada Soomaaliyeed wey jiheyn kartaa waayo su'aasha ama mowduuca laga doonayo ayey bulshada dhex dhigeysaa, marka hadii ay su'aal qaldan dhex dhigto ra'yul caam qaldan ayaa soo baxaya, hadii ay su,aal sax ah dhex dhigtana ra'yul caam sax ah ayaa soo baxaya.
Su'aal: Caanageel sida uu Terra sheegay saxaafada ayaa hagta mujtamaca hadaba mudadii aad tifaftiraha kasoo aheyd wargeyska Xog-ogaal ma jiraan qaladaad aad is leedahay waad gasheen oo aad shacabka ku marin habaabiseen?
Caanageel: Runtii qof waliba mas,uuliyadiisa ayuu leeyahay, dhibaatadu waxey aheyd meesha laga shaqeynayey. Dad wada dhashay oo dirirayey ayaa wararkooda lasoo tebinayey, marka khaladka aan is dhihi karo waa la galay ayaa ah in wararka khuseeya hal dhinac la tebiyo, taasoo noqotay mid buun buunin u noqota dad gaar ah sababtana in ay dadkaasi caan noqdaan, xumaana ma aheyn in hal dhinac laga soo tebiyo wararka ee dhibaatadu waxey aheyd iyadoo ay adkeyd helitaanka wararka dhanka kale.
Terra: Xiligii hore saxaafada iyo bulshadoo idil waxey ku jireen cabur, caburkaasna waxaa ka dhashay qarax, qaraxii dhashay ayaa si qalad ah loo maareeyay, waayo waxaa la gabay in si wadaniyad loo maareeyo, taasoo sababtay in itijaah qaldan soo baxo. Xoriyadii saxaafada ee la helay burburkii dowlada kadib ayaa meel qaldan lala aaday, sida uu Caanageel sheegayna xoriyadu hadeysan nidaam laheyn waxey ka dhigan tahay mid aan jirin, anigu ma qabo in ay xoriyad saxaafadeed Soomaaliya ka jirto waayo sharci iyo dowlad wadankii kama jiraan, waxaana meesha ka baxay mas'uuliyadii saxaafada, waxaana qaldamay hadafkii saxaafada. Sidoo kale dhaqaale xumada haysata suxufiyiinta Soomaalida ayaa sababtay in ay sariigtii lunto oo run iyo been isku mid noqdaan.
Su'aal: Caanageel sida uu sheegay Terra saxaafadu hadaf bey leedahay, wadamadan galbeedka saxaafada ka jirtana waxey kala taageeraan xisbiyada dalalka ka jira. Hadaba wargeyska Xog-ogaal ma leeyahay hadaf siyaasadeed?
Caanageel: Wargeyska Xog-ogaal ma jiro koox, siyaasi, amaba urur, ha ahaado mid siyaasadeed, mid beeleed, amaba mid diineed oo uu taageero, ujeedada loo aasaasayna waxey aheyd in la helo saxaafad dhex dhexaad ah. Waxaa muhiim ah in ay saxaafadu yeelato anshax iyada haga, isla markaana ay u adeegto qaranka Soomaaliyeed.
Terra: Xiligii burburka waxaa soo baxay dad jaceyl warbaahinta u qaba, weriyeyaal badan ayaa soo baxay, dad saxaafada lacagtooda u hura ayaa soo baxay, waxaasoo idilna waa wanaag soo kordhay, balse sida aan horay u sheegay waxey arimahani keeneen in xoriyadii saxaafada qaab qaldan loo adeegsado oo hadafkii saxaafada ee ahaa in dadka la wargeliyo, in wax la baro iyo in la maaweeliyo ayaa meesha ka baxay. Saxaafadeena hadey doorkeeda garan laheyd waxey ku guuleysan laheyd in ay dadka xakameyso oo ay u jiheyso xaga wanaaga kana celiso xumaanta la galayo, dhibaatada maanta na haysatana maba jirteen, balse Saxaafadeena goolkii ay heshay burburkii dowlada kadib ee ay is laheyd dhali ayaa laba geeriyaad ku noqday
Su'aal: Caanageel waxaad adiga iyo Terra sheegteen in saxaafadu hadafkeedii ka leexatay, hadaba sidee loo sixi karaa khaladkaas?
Caanageel: Dhibaato waxaa ah dadka maanta lala shaqeynayo ee siyaasiyiinta ah, waxaa suurta gal ah in maanta siyaasi yiraahdo suxufi hebel waa mujaahid, hadana beri uu yiraahdo suxufigaas waa in la dilaa, marka sidii wax lagu sixi lahaa wey adag tahay, waxaana meesha ka maqan arrimo muhiim ah sida; in suxufiga noqdo mid xishooda xaqiiqadana qora; qodobka labaad waxaa weeye in la helo dad sida wax loo qoro yaqaan; qodobka sadexaadna waxe weeye in la helo qawaaniintii hagi laheyd saxaafada.
Su'aal: Terra waxaa jirta in suxufiyiin fara badan oo da'yar ay dhowaanahan kasoo waramaan dalka Kenya ee uu ka socdo shirka dib u heshiisiinta Soomaalida. Hadaba waxaa nagu maqaalo ah in hogaamiye- kooxeedyada meesha ku shirsan ay adeegsadaan suxufiyiintan da'da yar iyagoo ka faa'ideysanaya dhaqaale xumada haysatana laaluush siiya suxufiyiinta, kadibna wixii ay doonaan u higaadiya, kuna amra in ay wararkaas bahiyaan. Hadaba maxaad arintaas kala socotaa?
Terra: Wey jiraan dhalinyaro fara badan oo halkan wararka kasoo tebiya, kuwaasoo badankood u shaqeeya website-yada internetka, kuwo idaacadaha iyo wargeysyada u shaqeeyana wey joogaan. Meeshan waxaa lagu dagaalamayaa taytalo xasaasi ah nuxurkoodana uusan aheyn mid u adeegaya wanaaga mujtamaca Soomaaliyeed. Waa run in suxufiyiinta la adeegsado, waxaana jirta in meesha ay siyaasiyiinta ku dagaalamaan ay noqotay saxaafada.
Su'aal: Caanageel waxaa jirta in Haaruun Macruuf qeybtii 1aad ee barnaamijkan noogu sheegay in qormo kusoo baxday wargeys Muqdisho kasoo baxa ay sababtay in ay laba beelood isku dhacaan, hadaba mudadii aad tifaftiraha ka aheyd wargeyska Xog-ogaal maku soo martay dhacdo nocan oo kale ah?
Caanageel: Runtii in waxa saxaafada kusoo baxa lagu diriro laguna heshiiyo waa wax caam ah, gaar ahaan saxaafada Muqdisho oo aan aqoon u leeyahay, waxaa dhacda in aysan shacabka kala saari karin amaba si dhab ah u tarjumi karin wararka ay siyaasiyiinta is dhaafsadaan. Marka saxaafadu colaad iyo heshiisba wey sababtaa, waxaanse is leeyahay inta ay heshiiska ka shaqeysay ayaa ka badan inta ay colaada ka shaqeysay.
Su'aal: Terra waxaad saxaafada kusoo biirtay 1973 waxaadna kusoo dhex jirtay 31 sano, hadaba waxaad moodaa in ragii kula midka ahaa iyo kuwii kaa horeeyayba ay saxaafada kasii guranayaan, hadaba maxaa arintaa sababay?
Terra: Anigu weli waan ku jiraa saxaafada, idaacad Kenya kasoo baxda ayaan ka shaqeeyaa, waana runtaa oo suxufiyiintii aan isku waqtiga aheyn iyo kuwii iga horeeyay waxaad moodaa in ay ka baxeen saxaafada, waana waxyaabaha keenay dhalashada dhalinyarada da'da yar ee maanta saxaafada la wareegay. Waa muhiim in jiilba jiil saxaafada u gudbiyo oo lala kala wareego balse jiilalka saxaafada lakala wareegaya waa in ay isa soo gaaraan oo kuwa yaryar ay khibrad ka qaataan jiilka waaweyn. Warfidiyeenka Soomaaliyeed waa in ay u ololeeyaan xuquuqda bini aadamka, waana in ay taageeraan loolanka wanaaga, waayo xumaan iyo wanaag ayaa ku dagaalamaya Soomaaliya. Warfidiyeenku waa in ay bulshada nabada u jiheeyaan. Waa in ay wargelinta iyo waxbarida bulshada ku saleeyaan xaqiiqda, isla markaana ay wanaaga u horseedaan, xoriyada saxaafadana ay si wanaagsan u adeegsadaan. Hadii aysan saxaafadu kobcin oo ay lamid ahaato shacabkeena reer guuraaga ah waxaa dhacaya in aanu doorka suxufigu is bedelin. Hadaba waa in Warfidiyeenka Soomaaliyeed ku dadaalaan aqoonta si ay markaas door weyn uga qaataan hagida iyo wacyi gelinta mujtamaceena Soomaaliyeed.
Su'aal: Caanageel intii aad ka shaqeyneysay wargeyska Xog-ogaal ma jireen dhibaatooyin idinka soo gaaray hogaamiye-kooxeedyada Soomaalida?
Caanageel: Waxaa jirta in sadex jeer shaqsiyadeyda la weeraray waxaase iigu dhib badneyd August 1993 mar ay ciidamo hubeysan iigu soo dhaceen gurigeyga, nin dadkii isoo weeraray kamid ah oo la qabtayna sheegay inuu lacag fara badan kusoo qaatay inuu aniga i dilo. Dhibaatada jirta Soomaalida ayaan la wadaagnaa ninkii waxbaan qorayaa yirina waa kasii daran yahay.
Su'aal: Ma jiraa urur ay ku mideysan yihiin wargeysyada Muqdisho kasoo baxa?
Caanageel: Waxaa la ii sheegay hada intii aan soo maqnaa in urur ay ku mideysan yihiin wargeysyada Muqdisho la dhisay waxaase jiray urur ay ku mideysnaayeen dhamaan hay'adaha saxaafadeed ee Muqdisho ka jira oo SIJU la oran jiray Siciid Bakar uu ka ahaa gudoomiye anigana aan gudoomiye-ku-xigeen ka ahaa, ururkaasina waa burburay. Runtii ururadii dhisnaa ama kuwa hada la dhisaayo ma ahan kuwo u diyaarsan in ay mustaqbalka u ololeeyaan helitaanka iyo dhaqan gelinta shuruuc saxaafadeed oo madax banaan sababtoo ah iyagana waa iska soo horjeedaan dad badan oo tayo lehna meesha ma joogaan?
Su'aal: Ma jirtaa talo, tusaale ama baaq aad u gudbineyso suxufiyiinta Soomaaliyeed?
Caanageel: Waxaan ku baaqayaa in aragti Qaran la yeesho, lagana xoroobo qabyaalada iyo damiir la,aanta. Waxaa kaloo muhiim ah in in website-yadan sumadaha qabiil iyo magacyada tuulooyinka lawada baxay ee qora hal war oo isku mid ah, isla markaana ku xadgudba xuquuqda qoraalka ay iska ilaaliyaan xadgudubyada ay ku kacayaan, isla markaana ay ka digtoonaadaan inuu kusoo faafo cudurka dalka ka jira. Waana in ay noqdaan suxufiyiin qawaaniinta saxaafada raaca, maadaama ay joogaan wadamo ay dowladi ka jirto.
Waxaa barnaamijkan soo saaray